AKHRI: Waxyaabihii lagu heshiiyay kulankii ay labada Aqal dhexmaray | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRI: Waxyaabihii lagu heshiiyay kulankii ay labada Aqal dhexmaray
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa xalay magaalada Muqdisho kulan wadajir ah ku yeeshay guddiyadda joogtada ah ee labada aqal ee uu ka kooban yahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kulankaas oo looga hadlayay dardargelinta wadashaqeynta labada aqal.
Kulankan ayaa waxaa si wadajir ah u shir Guddoomiyaha Guddoomiyaasha Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Shirkan oo ay sidoo kale goobjoog ahaayeen guddoomiye ku-xigeennada koowaad ee golaha shacabka iyo Aqalka Sare ayaa ahaa shirkii labaad oo ay yeeshaan guddoonka iyo guddiyada joogtada ah ee labada aqal kuwaa oo looga arrinsanayay dib u soo celinta iyo dardargelinta xiriirka iyo wada shaqeynta labada aqal ee baarlamaanka.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in la xalliyay kala aragti duwanaansho yar oo labada Aqal dhexdooda ka jirtay, islamarkaana Guddiyada isku shaqada ah ee Baarlamaanka wadashaqeyntooda ay sii xoojin doonaan.
Dhanka kale, guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in labada aqal ay hal baarlamaan isku yihiin wadashaqeyn joogta ahna ay ka dhaxeyso,sidoo kalena gudiyada joogtada ah loogu baahanyahay in ay sii xoojiyaan xiriirkooda.